Malunga nathi - Hebei TUBO Machinery Co., Ltd.
I-Hebei TUBO Machinery Co., Ltd. ivelisa nge-welding I-ERW Tube Mill / Pipe Mill, LSAW (JCO) Pipe Mill, Cold Roll Ndiyila Umatshini kunye uqhoqhoqho Line, kunye nezixhobo ezincedisayo ngaphezulu kwe- Iminyaka eli-15, siphuhlisile kwaye sakhula ngokuhambelana neemfuno zentengiso eziguqukayo.
Ngesoftware yoyilo lwe-morden nangaphezulu kwe Iiseti ezingama-130 zazo zonke iintlobo zezixhobo zomatshini ze-CNC, Oomatshini beTUBO bebesoloko bephuhlisa kwaye beqinisa ulwazi lwayo ebaleni ngexesha.
Iinkosi zeTUBO iTekhnoloji yoSetyenziso oluQhelekileyo oluSebenzayo lwehlabathi, i-FF Forming, i-FFX Forming, ngokuthe ngqo yenze i-Squarenjl njl Emva kokubala okuphuculweyo kobungakanani kunye neziphumo zezicelo zomthengi, sinokuyila umbhobho / umatshini wombhobho ogcina utyalo-mali luphelele.
OOMatshini be-TUBO baphumelele kwimigca yokuvelisa yasekhaya nakwelinye ilizwe yemibhobho yokugaya imibhobho, oomatshini ababandayo bokwenza oomatshini kunye nokulayita imigca enegama elihle kunye nomgangatho. Oomatshini bethu bathunyelwe ngaphandle EChile, eColombia, eMexico, e-Ecuador, eRashiya, eAlbania, eTurkey, e-Iraq, e-Iran, eCyprus, eSyria, e-Uganda, e-Angola, e-Ethiopia, e-Vietnam, e-Cambodia, e-Russia, e-Kazakhstan, e-Uzbekistan, e-Kyrgyzstan, e-Tajikistan njl.
OOMatshini be-TUBO abenzi kuphela oomatshini abaphezulu, kodwa bakwanikezela ngenkonzo yobuchwephesha kunye nasemva kwentengiso. Okwangoku, uluhlu lwemveliso luyahambelana neemfuno kunye nezicelo zabasebenzisi.
Oomatshini be-TUBO, njengeqabane labasebenzisi, babonelela kuyo yonke indawo nangaliphi na ixesha nanini ubunjineli obuphezulu kunye nenkxaso yezobuchwephesha, ulwazi, izimvo kunye neenkonzo ezifanelekileyo. Impumelelo yabasebenzisi bayo izisa impumelelo yoomatshini beTUBO.
OOMatshini beTUBO-Yenza ixabiso labasebenzisi!
Umzantsi Melika Ntshona Yurophu Mpuma Asia Mpuma Mpuma Afrika Oceania
Inkampani yokuThengisa yoMvelisi
Inani labasebenzi: > 236
Ukuthengiswa konyaka: > IZIGIDI ezingama-25
Unyaka oMiselweyo: 1997
Thumela pc: <10%
1. Inkonzo yokuthengisa kwangaphambili
Iinjineli zeTUBO OOMATSHINI zihlalutya iimfuno zomsebenzisi ngononophelo, ukuqinisekisa ukuba zonke iimfuno zinokuhlangatyezwa ngokufanelekileyo.
2. Ukufakwa kunye nokugunyaziswa
Ukujika-isitshixo ufakelo kunye nokugunyaziswa kweetyhubhu zokugaya ezigqityiweyo, imigca yokuqhawula, oomatshini bokwenza roll;
Ukonganyelwa kokufakwa kunye nokugunyaziswa;
Uqeqesho lwabasebenzisi / abasebenzi ngexesha lokugunyazisa;
Ukusebenza kwexesha elide lokusila, ukuba kuceliwe;
3. Inkxaso yasemva kokuthengisa
OOMATSHINI BETUBO banokunika iseti yeenkonzo ezifanelekileyo emva kokuthengisa kubathengi. Emva kofakelo kunye nokugunyaziswa, uqeqesho olubanzi lobuchwephesha luya kubonelelwa kubaqhubi nakubasebenzi bokugcina. Umsebenzi wokuthengisa emva kokuthengisa uza kugcina irekhodi eneenkcukacha zolwazi lwabathengi kunye nenqanaba lezixhobo zomthengi, kwaye enze uhlaziyo lwamaxesha kunye nokulandelela okuvaliweyo. Kwimeko yawo nawuphi na umbuzo, injineli yethu yolondolozo iya kwenza impendulo ekubonisaneni nomnxeba ubusuku nemini, inike izisombululo zobuchwephesha ngomonde nangocoselelo, kwaye inike imiyalelo kumqhubi okanye kubasebenzi bokugcina.
4. Inkxaso yokwahlukana
Iinjineli ezinezakhono kunye namava TUBO OOMATSHINI bakulungele ukujongana nalo naluphi na uhlobo lokonakala.
Uncedo lobuchwephesha kunye neengcebiso ngefowuni kunye / okanye nge-imeyile;
Inkonzo yezobugcisa eyenziwa kwindawo yoMthengi, ukuba iyafuneka;
Ukuhanjiswa okungxamisekileyo kwezinto zoomatshini neze-elektroniki;
5. Ukuhlaziya nokuhlaziya
TUBO OOMATSHINI unamava ngokubanzi ekuphuculeni, ekuvuseleleni okanye ekuhlaziyeni Mills ityhubhu ubudala. Iinkqubo zolawulo zinokuba ngumhla kwaye zingathembeki emva kweminyaka emininzi ebaleni. Siyakwazi ukubonelela ngolawulo lwamva nje kwi-PC, i-PLC kunye ne-CNC. Iinkqubo zoomatshini kunye nezinxulumene nazo zinokuxhamla kulungiso okanye ukutshintshwa, zinika umsebenzisi imveliso ekumgangatho ongcono kunye nokusebenza okuthembekileyo kumatshini wabo.
Thina, u-Hebei TUBO Machinery Co., Ltd., ukuvelisa kunye nokuthumela ngaphandle ityhubhu / umbhobho wokugaya, umatshini obandayo wokwenza umatshini kunye nomgca wokuqhawula, kunye nezixhobo ezincedisayo iminyaka engaphezu kwe-16, savelisa kwaye sakhula ngokuhambelana neemfuno zentengiso eziqhubekayo .
Ngaphezulu kweeseti ezili-130 zonke iintlobo ze-CNC zempahla yokuxhobisa, abasebenzi abangaphezu kwama-200, i-Approx. I-45,000 yeemitha zesikwere sendawo yomgangatho, oomatshini be-TUBO bebesoloko bephuhlisa kwaye beqinisa ulwazi lwayo ebaleni ngexesha. Ukutshintsha kunye nokuthobela izicelo zabathengi bayo, inkampani ithathela ingqalelo abathengi bayo abanelungelo elinokuthenjwa nelibalaseleyo kumaqabane.
Iimveliso zethu ziye zadlula izatifikethi ezininzi.
Jonga ngakumbi ngathi